Otu esi ejikọ na inntanetị na mpaghara dịpụrụ adịpụ - Geofumadas
Eprel, 2013 Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ, njem
M na-eche mgbe niile ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na m ga-aga biri n’obere obodo, ebe a na-enweghị ike ịbanye na njikọta obodo anyị. Ugbu a karịa ọrụ ntụrụndụ anyị na mmekọrịta anyị na thentanetị na-eme ka anyị mara banyere ozi ịntanetị ọhụụ, ozi na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ ozi ngwa ngwa.
Izu ole na ole gara aga enwere m ike igosipụta ya, mgbe m gara ezumike Ista. N'ụzọ m chọpụtara na akara ekwentị adịghị mma, yabụ modem ahụ azaghị; ọ bụ ezie na akaụntụ Roaming na-abịakwute m dị ka m ji ya. Mgbe m jụrụ onye nwe obere ụlọ nkwari akụ ugwu ugwu banyere wireless, ọ hụrụ m ọzọ dị ka à ga-asị na ọ bụ anụmanụ dị egwu, ọ gwara m na ndị mmadụ bịara ebe ahụ ịpụpụ… ọ tụụrụ m Cantanetị Cafe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji iri anọ na ise.
Ọ bụ na-akpali ibi ndụ a ụbọchị na-enweghị ịhụ mail, unmoderated comments saịtị enweghị ọnụ ọgụgụ Analytics, ma m egwu agụụ gaje ahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na anyị nyere na ebe bụghị ikwu na ndị na-esonụ 6 awa nwere ike ibu akara nke aghụghọ ma ọ bụ na-enweghị isi.
Na, na, na ndị ịtụnanya nke na-enye ndụ m hụrụ a dara Gijon Spanish dina a hammoku, ya iPad mini-ekwu okwu site na FaceTime; Dika m maara na ozi a choro breeze netwọk, agara m ya ma muta ihe karia ihe m chere.
Afọ ole na ole gara aga, na-eche na anyị nwere ike ịnweta ọnụọgụ satịlị ga-abụrịrị ihe na-agaghị ekwe omume mana ọ dị oke ọnụ. Iche na ugbu a, ọ nwere ike ị nweta ya na ọnụahịa ndị sitere na 24,90 Euro kwa ọnwa na-eju anyị anya; Na a na nkà na ụzụ mere nnukwu strides n'agbanyeghị ụkpụrụ ndị yiri nnọọ ka ot telephony nnyefe, ugbu a àjà Internet, TV na telephony n'ime otu plan.
Ọ bụ maka Nhọrọ ụda ọnụọgụ abụọ, nke achoputara na ya n'asụsụ Bekee ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), ebe ihe ọhụrụ nke DSL a maara dị na nbudata na ibudata data na mgbatị nke na-enye gị ohere igwu egwu na ntụziaka iji nweta akara ngosi ebighi ebi; adabere na mgbanaka telivishọn igwe nke ebe a gaara eduga na akụkọ dị egwu na njedebe nke ọnwa ahụ.
N'ahịa ugbu a, e nwere ụzọ abụọ ị ga-esi nweta ya site na satellite:
Site na unidirectional usoro. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkekọrịta ọrụ ịntanetị iche.
N'ihe na Spain SkyDSL ọ na-enye kwa ọnwa ọrụ si 24,90 € na a ọsọ nke 1,5 Mbit / s, nke m na-eche bụ na-anabata ma ọ bụrụ na ọ na-atụle na Internet bụghị a ndọpụ uche na ụmụ si na-ele videos na Youtube mgbe rụọ n'ụlọ ma ngwá ọrụ iji jikọọ na agụmakwụkwọ ma ọ bụ azụmaahịa.
Mmetụta ahụ bụ mgbe niile na bandwit anyị chọrọ iji tụnyere njedebe / ebudata nkwụsị. N'ozuzu, nbudata ahụ dị elu karịa bulite ma enwere ọnọdụ pụrụ iche dịka mgbe anyị jiri FTP na-ebugo ozi na sava.
Site na usoro nnunu. N'okwu a, a na-eji modem pụrụ iche, na ọnụego kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị tụlee nke ahụ site na satellite dị ka SkyDSL na Flat S na ọ na-enye 6 MB nke nbudata na 39.80 Euro naanị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụahịa ahụ bụ Quantis.
Maka afọ ndị ọzọ, mgbe m na-echeta na enwere nkụda mmụọ site na àgwà mgbaàmà dara ogbenye mgbe ị na-emejuputa usoro cadastral na obodo, ana m eche na ugbu a, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ka mma. Tụkwasị na nke a, teknụzụ emeela ka ha nwekwuo ohere iji data na-arụ ọrụ site na ọrụ weebụ ma ọ bụghị faịlụ raw ma ọ bụ ọrụ njedebe.
Otu n'ime ihe na-agaghị emeli bụ mgbe niile na antenna na ngwa ndị siri ike inweta; mgbe ahụ, ha agafeela. Ndị ọrụ na-eweta ọrụ ugbu a na-enye ngwá ọrụ maka ịgbazite ma ọ bụ nkwụnye ego n'ebughị ụzọ tinye ego.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eche ịlaghachi azụ na ugbo gị ma na-atụ ụjọ ịpụpụ ... ọ bara uru ịkpọtụrụ ndị na - eweta ndị ọrụ mpaghara site na satellite.
Ejiri ya na Blogsy
Previous Post«Previous GPS na gam akporo, SuperSurv bụ nnukwu GIS ọzọ
Next Post Kedu ihe ụdị gvSIG 2.0 ọhụrụ pụtaraNext »